बढुवाका लागि दुई हजार सरकारी हाकिम बिदामा ! बिदा नलिएका पनि हाजिर गर्न मात्रै कार्यालय आउने | Hulaki Online
बढुवाका लागि दुई हजार सरकारी हाकिम बिदामा ! बिदा नलिएका पनि हाजिर गर्न मात्रै कार्यालय आउने
७ पुस, काठमाण्डौ । जनताले तिरेको करबाट तलव खाने सरकारी कर्मचारीहरु लोक सेवा आयोगले लिने बढुवाको परीक्षाका लागि लामो समयदेखि बिदामा बसिरहेका छन् । सहसचिव र उपसचिवका लागि खुलेको बढुवाका लागि अहिले करिव दुई हजार सरकारी हाकिम बिदामा बसिरहेको र बिदा नलिएका कतिपय अधिकृतस्तरका कर्मचारी पनि हाजिर गरेर कार्यालयबाट घर फर्किने गरेका छन् ।
कर्मचारी लोकसेवाले लिने विभिन्न परीक्षाको तयारीका लागि ६ महिनाअघिदेखि कार्यालय आउने र बाहिरिने गरे पनि त्यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरू समयमा आए–नआएकोबारे आकस्मिक छड्के निरीक्षण गर्दै आएको छ । तर, केन्द्रले कर्मचारीले कार्यालयमा कति समय दिन्छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले खवर छापेको छ